China HDPE ဆပ်ပြာပုလင်းများနှင့် နို့ဗူးအဝတ်လျှော်လိုင်း ရိုးရှင်းသော ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |PuRui
HDPE ဆပ်ပြာပုလင်းများနှင့် နို့ဗူးအဝတ်လျှော်လိုင်း ရိုးရိုးတန်းစီ ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက်
HDPE ပုလင်းအဝတ်လျှော်စက်သည် HDPE နို့ဗူးများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ HDPE ဆပ်ပြာပုလင်းအဝတ်လျှော်လိုင်း၊ HDPE ပိုးသတ်ဆေးပုလင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒါဟာဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်သို့ရောက်ရှိရန် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည်။
HDPE ပုလင်းလျှော်လိုင်း ရိုးရိုးလိုင်း
အဝတ်လျှော်ကြိုးကို တိုတိုနှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။CE လက်မှတ်နှင့်အတူ။
HDPE ပုလင်းဆေးခြင်းလိုင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အမှန်တကယ်ပရောဂျက်မှ အတွေ့အကြုံများစွာကို စုဆောင်းထားပါသည်။
HDPE ပုလင်းများသည် bales အတွင်းရှိ ဆပ်ပြာပုလင်းများ၊ နို့ပုလင်းများ စသည်တို့မှ လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဝတ်လျှော်လိုင်းသည် ဘေထုပ်ဖွင့်စက်၊ သံလိုက်ခွဲစက်၊ ရေဆေးစက်၊ ကြိတ်စက်၊ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း နှင့် ရေပေါ်ကန်နှင့် ရေနွေးလျှော်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခွဲသည့်ကိရိယာ၊ အရောင်ခွဲကိရိယာနှင့် လျှပ်စစ်ဗီဒိုတို့ ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် HDPE ပုလင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လိုင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ ပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိရန် သတ်မှတ်ထားသော စက်အချို့ကို ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
1000 ကီလိုဂရမ်/နာရီ HDPE ပုလင်းအဝတ်လျှော်လိုင်း အပြင်အဆင် ရိုးရှင်းသော လိုင်း
5.Horizontal screw အားသွင်းကိရိယာ
7.Medium speed ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း။
9.High speed ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း။
11. ရေနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။
12.High speed ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း။
13. အယ်လကာလီ ဆေးထိုးကိရိယာဖြင့် ရေစစ်ခြင်းစနစ်
16.Dewatering and wind transmission
18.High speed ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခြင်း။
20.Washing tank B
22.Hot pipe dryer
လုပ်ဆောင်ချက်- ကျောက်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ သတ္တုငယ်များကို စစ်ထုတ်ရန်နှင့် ဦးထုပ်များနှင့် ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန်။ အလုပ်ဆင်းချိန်ကို လျှော့ချရန်။
2.Middle speed Friction အဝတ်လျှော်ခြင်း။
အညစ်အကြေးများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးသေးသေးလေးများကို ဆေးကြောပေးပါ။
3.High speed Friction အဝတ်လျှော်ခြင်း။
အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောပြီး ညစ်ပတ်အောင် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
လှည့်နှုန်း: 1200 rpm၊
အစိတ်အပိုင်းများ ထိတွေ့ပစ္စည်းသည် သံမဏိ သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်း၊
အစိုဓာတ် 1% ရောက်အောင် ရေ၊ သေးငယ်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ သဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဓါးသွားများကို Anti-wear alloy ဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
5.Bottle flakes labels separator
ပုလင်းများတွင် ရောစပ်ထားသော အမှုန့်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပါ။
လျှပ်စစ် (kwh) ၁၇၀
ရေနွေးငွေ့ (ကီလိုဂရမ်) ၅၁၀
လက်ဆေးဆပ်ပြာ (ကီလိုဂရမ်/တန်) 5
PE အဝတ်လျှော်လိုင်း အရည်အသွေးနှင့် သတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် (kg/h) အလုပ်သမား ရေနွေးငွေ့လိုအပ်ချက် (kg/h) ရေသုံးစွဲမှု (M3/ဇ)
၁၀၀၀5၅၁၀ ၂.၁
၂၀၀၀6၇၉၀ ၂.၉
၃၀၀၀7၁၀၁၀ ၂.၈
ယခင်- စိုက်ပျိုးရေးလွန်ရုပ်ရှင် Recycle အဝတ်လျှော်စက်ရုံ
နောက်တစ်ခု: PP PE တောင့်တင်းသော ပလတ်စတစ်များနှင့် ညှစ်ထားသော ပလတ်စတစ်များအတွက် SJ အမျိုးအစား pelletizing စက်
HDPE ပုလင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလိုင်း...